Archive du 08/05/2012
Olan�ny fampianarana Hiverina ny 1972
Tsy eto Antananarivo Renivohitra irery ihany, fa efa hatrany amin�ny faritra maro manerana ny nosy no mikatona ny sekolim-panjakana, vokatry ny fitokonan�ny mpampianatra mpanabe mivondrona ao amin�ny SEMPAMA.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Afaka izy telo voasambotra teny Ambohijatovo
Mitavozavoza ny FAT ary lojika ny fihetsiky ny firehana Ravalomanana
Amin�ny maha sehatra ifampidinihana ny fikambanana Credo dia nitondra ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena ny filohany any Faradofay, Arson Ndimbizandry.
Mial� rehefa tsy hanova
Efa ny mpampianatra rehetra manerana an�i Madagasikara mihitsy izao no mampiato ny fampianarana, hoy ny CT Beanjara Paul.
Faminaniana hitan�i Noelah
Hatelin�ny vahoaka tsy ho ela ireo mpitondra amin�izao fotoana
Zava-doza avokoa ny fahitana hitan�ilay vehivavy mpahita ny hoavy etsy amin�ny 67ha raha vantany vao tafaverina teto Antananarivo izy.
Ratsimbazafy Joseph Michel
Tsy manam-bola hanefana ny fitakian�ny mpampianatra ny fanjakana
Rariny ny fitakiana ataon�ny mpampianatra ankehitriny, hoy ny mpikambana ao amin�ny Kongresin�ny tetezamita (Leader Fanilo) Ratsimbazafy Joseph Michel
Sendikan�ny mpanao gazety
Manome 72 ora ny minisitra �
Nivory teny Antanimena omaly maraina ny sendikan�ny mpanao gazety tarihan�ny filohany Rasoanaivo Rocco.
50 taonan�Analamahitsy Cit�
Misy kajikajy politika ny fankalazana
Tamin�ny taona 1962 no nanomboka nisy nipetraka ny trano teny Analamahitsy-Cit� Antananarivo Firaisana faha-5.
Lalatiana Rakotondrazafy sy Fid�le Razara Pierre
Nisy nanafika ireo mpanao gazetin�ny radio Free FM, Lalatiana Rakotondrazafy sy Fid�le Razara Pierre.
Famahana ny olan�ny mpampianatra
�Tsy azo atao tefy manta�, hoy Randriamanana Jean de Dieu
Miihenjan-droa ny tady eo amin�ny resaka olan�ny mpampianatra ankehitriny.
Fitokonana teny Ampitatafika
�Samy tsy manana ny marina ireo mpifanandrina�, hoy ny Ben�ny tan�na
Nanamafy hatrany ny fitakiany
Vao maraina dia efa nandeha ny fanentanana tao amin�ny kianjan�ny 180 Ariary any amin�ny lisea Antsahamarova Ambatondrazaka mampahery ireo mpanabe mba tsy hiroaroa saina manoloana ny fepetra miendrika fandrahonana nataon�ny minisitry ny fanabeazam-pirenena, Manoro R�gis, ny zoma 04 mey teo.
Nilanja sorabaventy ny mpianatra, nitety sekoly ny DREN
Nanatanteraka fitokonambe ny mpampianatra tao Antsirabe omaly alatsianiny 07 mey maraina.
Tsy mankato intsony ny baikon�ny minisitry ny fanabeazam-pirenena
Tezitra mafy ireo mpampianatra ao Amoron�i Mania raha naheno ilay teny midina miendrika fandrahonana nambaran�ny minisitry ny fanabeazam-pirenena ny zoma 04 mey teo.
Tsy nisy mpihaino i Manoro R�gis Nikatona avokoa ny ankamaroan�ny sekolim-panjakana
Vao manka nanamafy ny fiaraha-mientan�ny mpampianatra sy mpanabe ny ramatahora nataon�ny minisitry ny fanabeazam-pirenena ny zoma lasa teo izay naverimberina tamin�ny fahitalavitra tsy miankina iray teto an-drenivohitra ny faran�ny herinandro teo.
Hitokona tsy hampianatra
Fanapahan-kevitra tsy am-pisainana no nataon�ny minisitra mpiahy sady manoro vilana no mamahan-dalitra anay.
Naniry zaza ka tera-dahy !
Tsy milamina ny tany ! Izay no azo hamintinana ny zava-misy eto an-drenivohitra, izay azo itarafana tsara mihitsy ny mbola fisian�ny krizy eto amin�ny firenena.